Erdogan: Israaiil colaad ayay gobollka ka hurinaysaa - BBC News Somali
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Israaiil ku eedeeyey in ay colaad ka hurinayso Bariga Dhexe. Mr Erdogan ayaa faallo ka bixiyey duqaymihii ugu dambeeyey ee ay Israaiil ka gaysatay saldhigyo ay Iiraan ku leedahay gudaha dalka Suuriya. Israaiil ayaa sheegtay in ay weerarkaan kaga falcelinaysay weerar gantaal oo Iiraan ay ku qaadday ciidamadeeda ku sugan buuraha Golan Heights.
Balse Mr Erdogan oo la hadlayey barnaamijka gaarka ah ee BBC-da ee Hardtalk, ayaa cambaareeyay dhacdooyinkaan, wuxuuna sheegay in Israaiil ay si joogta ah cabsi uga abuurayso gobolka Bariga Dhexe.
Wuxuu intaas ku daray in Israaiil ay si joogto ah u cabsi galinayso Bariga Dhexe. "Waa tallaabo kale ayuu yiri oo loo qaaday dhanka argagixisnimada, Loomana dulqaadan karo falalka caynkaan". wuxuu iswaydiiyey sababta ay israa'iil ay u adeegsatay gantaalahaan, iyo waxa uu yahay hadafka ay rabaan in ay ka gaaraan.
Wuxuu sheegay in sheegashada Israaiil ee ah in Iiraan ay weerar kusoo qaadday buuraha Golan ay tahay xog aan la isku hallayn karin, asaguna uusan waxba ka ogayn Iiraanna wayba beenisay arrintaan.
Asagoo arrimahaas ka hadlaya madaxweyne Erdogan wuxuu yiri "Iiraan waxay leedahay arrintaan waxba kama jiraan, in aan hal dhinac warkeeda qaadanno waxay noqonaysaa qalad. Waxaan la hadlay madaxweynaha IIraan Xassan Ruuxaani, mana ay aqbalayaan dhacdooyinka noocaan ah, sidaas darteed sax maahan inaad hoos u dagto. Tallaabooyin ku aaddan dhanka nabadda ayaa loo baahan in si dagdag ah loo qaado. Haddiise aan sidaas la yeelin, mustaqbalka Bariga Dhexe wuxuu galayaa dhibaato hor leh. Waa inaan xal u helnaa xaaladda taagan. Dalalka reer galbeedka waxaa looga baahan yahay in ay dib u eegaan habdhaqankooda ku aaddan gobolka gaar ahaan Suuriya. Waxaan ka walaacsanahay hawgallada laga fulinayo gobolkaan Bariga Dhexe, gaar ahaan maraykanka, iyo Britain, Jarmalka, iyo dalal kale, taas oo xaaladda uga sii dari karta"